Dhaqaale loo urruuriyay dhismaha waddo isku xirta Gaalkacyo iyo Hobyo – Radio Muqdisho
Kulan dhaqaale loogu arruurinayay dhismaha waddo isku xirta Magaalooyinka Gaalkacyo iyo Hobyo ee Gobolka Mudug ayaa lagu qabtay Gaalkacyo, iyadoo ay ka qayb galeen xubno ka tirsan Maamulka Galmudug.
Kulanka oo ujeedkiisu ahaa dhaqaale urruurin ayaa waxaa ka qeybgalay waxgarad, aqoonyahanno iyo qeybaha kale ee bulshada, iyadoo xoogga lagu saaray sidii bulshada ay gacan uga geysan lahayd dhismaha wadadaasi oo gaaraysa 260- km.
Prof C/qaadir Shirwac oo ka hadlay kulanka ayaa sheegay in shacabka looga fadhiyo ka qeyb qaadashada dib-u-dhiska wadada isku xirta Hobyo iyo Gaalkacyo, isagoo intaa ku daray in qorshuhu uu yahay in wadadaasi ay noqoto mid bulshada loogu adeego.
kulanka ayaa inti ka hadashay waxa ay ganacsatadii ku yaboobeen lacago loogu talagalay in lagu dhiso wadadaasi, iyadoo wadarta guud ee lacagta la yaboohay ay gaareyso 4 kun iyo shan boqol oo doolarka Mareykanka.
Madaxweynaha oo hambalyo u direy haweenka Soomaaliyeed”SAWIRRO”
Madaxweynaha oo hambalyo u direy haweenka Soomaaliyeed"SAWIRRO"